ရှုံးထွက် အဆင့်ကို တက်ရောက်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပါက ၊ ပေးဆပ်မှုတွေ ကြီးမားလာနိုင်တဲ့ PSG | Football Myanmar
ရှုံးထွက် အဆင့်ကို တက်ရောက်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပါက ၊ ပေးဆပ်မှုတွေ ကြီးမားလာနိုင်တဲ့ PSG
November 28, 2018 Adam Willian	1,113 Comments
ဒီနှစ် ချန်ပီယံလိဂ် ဘောလုံးရာသီ ရဲ့ မရဏ အုပ်စုလို့ တင်စား ခေါ်ဝေါ်ထားခဲ့ကြတဲ့ လီဗာပူး ၊ ပီအက်စ်ဂျီ ၊ နာပိုလီ နဲ့ ရက်စတား ဘဲဂရိတ် အသင်းတို့ရဲ့ အုပ်စု C ပွဲစဉ်တွေဟာ ဒီညမှာ ပြန်လည် ယှဉ်ပြိုင် ကစားကြတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပွဲစဉ်4ကစားပြီးသည် အထိ ရှုံးထွက် အဆင့်ကို တက်ရောက် နိုင်မယ့် အသင်းဟာ ပေါ်ထွက်လာခြင်း မရှိသေးပဲ ၊ လီဗာပူး နဲ့ နာပိုလီ တို့က ရမှတ်6မှတ်တူ ၊ ဂိုးကွာခြားချက်နဲ့ ထိပ်ဆုံးကနေ ရပ်တည်လျှက် ရှိနေကာ ၊ ပီအက်စ်ဂျီ က5မှတ် ရက်စ်တားက4မှတ် အသီးသီး ရယူထားတာကြောင့် နောက်တစ်ဆင့်ကို တက်ရောက် နိုင်ဖို့ အတွက် အသင်းတွေ အားလုံးက အခွင့်အရေး ကိုယ်စီ ရှိနေကြဆဲပါ ။
ဒီညမှာတော့ နာပိုလီ – ရက်စတား ဘဲဂရိတ် ၊ ပီအက်စ်ဂျီ – လီဗာပူး တို့ ပွဲစဉ်တွေ ယှဉ်ပြိုင် ကစားကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လီဗာပူးဟာ ပီအက်စ်ဂျီကို အနိုင်ရရှိခဲ့ ပါက နောက်တစ်ဆင့်ကို တက်ရောက်သွား နိုင်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်း များနေပြီး ၊ နာပိုလီကလဲ ရက်စတားကို အနိုင်ရရှိ ပါက အခြေအနေကောင်းတွေ ကို ပိုင်ဆိုင်သွားနိုင်တဲ့ အနေအထား ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီထဲမှာ အမှားခံလို့ မရပဲ ဖြစ်နေတာက ပီအက်စ်ဂျီ အသင်း ပါ ၊ လီဗာပူးကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့ ပါက အုပ်စုဗိုလ် အဖြစ် မျှော်လင့်ချက်တွေ ကုန်ဆုံးသွားနိုင်တဲ့ အပြင် ၊ ကွင်းပြင်ပ ဘဏ္ဍာရေး ဆိုင်ရာတွေပါ များစွာ ထိခိုက်လာနိုင်ဖွယ် ရှိနေ ပါတယ် ။
လက်ရှိ အချိန်မှာတော့ UEFA ဟာ သူတို့ရဲ့ ဘဏ္ဍာရေး ဆိုင်ရာ လည်ပတ်မှုတွေကို ပြန်လည် စစ်ဆေးဖို့ ပြင်ဆင်လျှက် ရှိနေတာကြောင့် ၊ ကလပ် အသင်းတိုင်းအတွက် အဓိက ၀င်ငွေလမ်းကြောင်းကြီး တစ်ခု ဖြစ်နေတဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲကသာ စောစော စီးစီး ထွက်လိုက်ရမယ် ဆိုပါက ဘဏ္ဍာရေး ရှင်းတမ်း ကိစ္စမှာ သက်ရောက်မှုတွေ အများကြီး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီက သူတို့ဟာ ရှုံးထွက် အဆင့်ကနေ နှုတ်ဆက်ခဲ့ရပေမယ့် ၊ ချန်ပီယံလိဂ် ကနေ ရရှိငွေဟာ ယူရို 62 သန်း အထိ ရှိခဲ့တာမို့ ၊ အနေအထားတစ်ခု အထိ ခံသာခဲ့တယ်လို့ မှတ်ချက် ပြုကြရမှာပါ ။
ပြင်သစ် အခြေစိုက် သတင်းတွေ ကတော့ ပီအက်စ်ဂျီဟာ ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စုကနေ ထွက်လိုက်ရလို့ ၊ ၀င်ငွေတွေ ထိုးကျသွားမယ် ဆိုရင်တောင် 2019 ခုနှစ်မှာ ကုန်ဆုံးတော့မယ့် စပွန်ဆာ စာချုပ်တွေကို ပြန်လည် အသစ်ထပ်မံ ချုပ်ဆိုရင်း FFP စည်းမျဉ်း ကို ကာကွယ်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လိုအပ်ပါက အေစီမီလန် အသင်းက ဒီနှစ် အစောပိုင်းမှာ လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ CAS တရားရုံးကနေ တဆင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ ပုံစံအတိုင်း ၊ လုပ်ဆောင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ သုံးသပ်နေကြပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ Nike နဲ့ ဂျာစီ စပွန်ဆာ စာချုပ်သစ် ချုပ်ဆိုဖို့ တရားဝင် ဆွေးနွေးမှုတွေ ပြုလုပ် နေပြီ ဖြစ်တဲ့ အပြင် ၊ အဓိက စပွန်ဆာ တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Fly Emirates ရဲ့ နေရာကိုလဲ အခြား နာမည်ကျော် အမှတ်တဆိပ်နဲ့ အစားထိုးဖို့ ကြိုးစားလျှက် ရှိနေပါတယ်။ သို့သော် ဒီတစ်ကြိမ် စာချုပ် ချုပ်ဆိုရမှာတော့ ပီအက်စ်ဂျီ အနေနဲ့ သူတို့ စာရင်းပြချင်တဲ့ အတိုင်း ချုပ်ဆိုခွင့် ရရှိမှာ မဟုတ်ပဲ ၊ ပြင်ပ ကာလ တန်ဖိုးအတိုင်း ချုပ်ဆိုရမယ်လို့ UEFA က သတိပေးထားတာပါ။
အဲဒီ အနေအထားကြောင့်ပဲ ပီအက်စ်ဂျီဟာ ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စု အဆင့်နဲ့သာ ကျေနပ်ရမယ် ဆိုပါက ၊ FFP စည်းမျဉ်းတွေကို အတွင်း လည်ပတ်နိုင်ဖို့ တန်ဖိုးကြီး ကစားသမား တစ်ဦးဦးကို ပြန်လည် ရောင်းချရဖွယ် ရှိနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လက်ရှိမှာလဲ နေမာကို ဘာစီလိုနာက ပြန်လည် ခေါ်ယူမယ့် သတင်းတွေ ဆက်တိုက် ပေါ်ထွက် လာနေသလို ၊ ဘာပေကိုလဲ ရီးရဲက အလိုရှိတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်လျှက် ရှိနေပါတယ်။
ကတ်တလန် အခြေစိုက် သတင်းတွေကတော့ ဒီမနက်မှာပဲ ပီအက်စ်ဂျီ နဲ့ နေမာတို့အကြား ယူရို သန်း 200 နဲ့သာ ကမ်းလှမ်းမှုတွေ ရှိလာပါက အသင်းပြောင်းခွင့် ပေးဖို့ သဘောတူညီမှု ရယူထားတယ်လို့တောင် ရေးသားနေကြတာပါ။
နေမာ ၊ ဘာပေ တို့ကို ယူရို သန်း 400 နီးပါး အကုန်ကျ ခံပြီး တည်ဆောက်ထားခဲ့တဲ့ အသင်းတစ်သင်းဟာ ချန်ပီယံလိဂ် ဖလားကို ဆွတ်ခူးဖို့ ပစ်မှတ် ထားခဲ့ပေမယ့် ၊ လက်ရှိ အချိန်မှာတော့ အုပ်စု အဆင့်ကနေတောင် တက်ရောက်ဖို့ အသည်းအသန် ရုန်းကန်ရတော့မှာ ဖြစ်ပြီး ၊ အခန့်မသင့်ရင် အဆိုပါ ကစားသမား နှစ်ယောက် စလုံးကိုတောင် ပြန်လည် ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့ အထိ အခြေအနေတွေ ဆိုးရွား သွားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
Previous Post“ ကျနော်က ချန်ပီယံလိဂ် ကစားခွင့် ရတဲ့အကြိမ်တိုင်း ရှုံးထွက်အဆင့်ကို ရောက်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့သလို ၊ ယူရိုပါလိဂ် ကစားခွင့်ရတဲ့2ကြိမ်မှာတော့2ကြိမ်စလုံး ဖလားကို ဆွတ်ခူးပေးခဲ့တာပါ” မော်ရင်ဟိုNext Postရော်နယ်ဒို ကို ဘာစီလိုနာ အရောက်ခေါ် နိုင်ဖို့ ၊ စားပွဲထိုးပုံစံ ၀တ်စားပြီး ကြိုးစားခဲ့ရတဲ့ အကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတဲ့ ဘာစီလိုနာ ဥက္ကဌဟောင်း ဂျိုအန် ဂတ်စ်ပတ်
1,113 thoughts on “ရှုံးထွက် အဆင့်ကို တက်ရောက်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပါက ၊ ပေးဆပ်မှုတွေ ကြီးမားလာနိုင်တဲ့ PSG”
I have read so many articles about the blogger lovers however this article is genuinelyapleasant article, keep it up.
cf54 cheap viagra for women canada
[url=http://viaggrra.com/]online viagra fast shipping[/url]
generic 50 viagra
January 23, 2019 at 2:52 am
f588 cialis 10mg tabs
[url=http://cialiskkqq.com/]cialis tarif pharmaci[/url]
cialis en generic cialis
be is in new zealand
c8d8 no prescription is is
February 9, 2019 at 1:39 am
241a viagra vente libre quebe
[url=http://cheapviagrater.com/]brand generic viagra[/url]
viagra generico ordin
pfizer is discount
9f8c is aus holland kaufen
200 mg is prostitute
February 12, 2019 at 4:50 pm
9f8c women is effects
tadalafil is soft 10mg uk
February 14, 2019 at 1:56 am
c471 vente is canada
is tablet split
c471 is tadalafil 20mg
c471 wholesale at is
at is soft comparison
c471 is from mexico
c471 is contrareembolso espan
where can i be is cream
11bf india best is
11bf at is wikipedia
effet is image
11bf where to get isin the us
is is forum
February 17, 2019 at 1:45 am
11bf is hospital
at is works
order is uk here
female is online uk
11bf is purchase with discover
is online mit rezept
ef1c is mexico at online
ef1c is brand vs
is online side effects
ef1c is dosages instruction
f7ad 50mg generic viagra
[url=http://viagrauupl.com/]viagra professional pharmacies[/url]
DATING SITES FREE http://sexinyourcity.ml
February 19, 2019 at 2:56 am
be cheap is super force
320a best canadian at is
320a venta is en peru
click now get is in canada
320a acquisto is internet
320a be cheap is brand
320a acheter is paypal
a672 only now is daily
wow canadain is india
a672 how much is is in spain
trovare is senza ricetta
a672 can get free is
a672 alternatives to is uk
only now is daily
a672 i use it be is now
a672 be is in bali
is femeninoaprecio bajo
a672 is tauranga
5c8f is fr kvinnor flashback
is usa women
5c8f cheap at is online
click now is online canada
5c8f at is wholesale price
lowest price is more
5c8f try it lowest priced is
5c8f can i be is with paypal
5c8f is en vent
vente is is levitra
is enzyme inhibitor
45f0 real is online usa
is and women
45f0 usefull link feamal is uk
regalis at is
lowest cost is online
brand is ships from india
e863 when to take is 10mg
e863 review is onceaday cost
February 27, 2019 at 1:15 am
e863 best at products is
e863 is daily use coupons
e863 is in the uk
9f03 is per uomo
9f03 is online prices
9f03 is super aktiv kaufen
where to be is in jakarta
9f03 is billig europa
is online morbidi
9f03 daily dose is
9f03 comprar is en jaen
54a1 be is on line in hawaii
54a1 generika is
54a1 reviews with is
54a1 best at is website
54a1 only here pfizer is cheap
54a1 is recreational dosage
6741 order is europe
is women india price
6741 is professional comprare
is at tablets
March 3, 2019 at 5:07 am
March 3, 2019 at 6:48 pm
http://valtrexcompareprices.com/ – Generic Valtrex
March 4, 2019 at 5:00 am
March 4, 2019 at 7:12 am
df7f just try is pfizer online
http://zithromaxcheapestoffers.com/ – antibiotic zithromax
http://fluconazole.us.com/ – Buy Fluconazole Online
df7f precio de is au
March 5, 2019 at 6:38 am
minnesota teachers is
37a0 costo is original
comprar is soft
37a0 visit web site is on women
March 6, 2019 at 9:09 am
http://zithromaxnorxprice.com/ – Zithromax Price
http://propranololnorxprice.com/ – your domain name
http://lexaprocheapestoffers.com/ – bonuses
March 8, 2019 at 4:07 am
http://colchicine247.us.com/ – colchicine for pseudogout
http://orlistat.us.com/ – click
http://pioglitazone.us.com/ – Cheapest Pioglitazone
http://lasixnorxprice.com/ – LASIX ONLINE NO PRESCRIPTION
http://accutane02.us.com/ – accutane 5mg
http://plavix.us.com/ – PLAVIX ONLINE
http://allopurinol365.us.com/ – purchase allopurinol
March 8, 2019 at 5:46 pm
http://accutane02.us.com/ – accutane online pharmacy
http://tetracyclinebestchoice.com/ – Tetracycline 500
http://sildenafilbestchoice.com/ – sildenafil citrate 50 mg
0a27 is 20g
http://lasixnorxprice.com/ – Lasix 40 Mg
http://tadalafilcheapestoffers.com/ – purchase tadalafil
http://colchicinenorxcost.com/ – COLCHICINE FOR SALE
http://cialisonline247.us.org/ – buy cialis online canada pharmacy
http://acyclovircheapestoffers.com/ – acyclovir5cream
http://cialisonline247.us.org/ – Cialis Online
http://sildenafilbestchoice.com/ – sildenafil pfizer
March 10, 2019 at 6:47 pm
cafergot from canada
http://cafergot2016.us.com/ – Cafergot Online
http://ventolinbestchoice.com/ – buy ventolin inhaler online
http://tadalafilovercounter.com/ – tadalafil 20 mg
http://albuterolcompareprice.com/ – Buy Albuterol
http://retinacream.cricket/ – tretinoin cream retin a
http://tadalafil006.com/ – tadalafil
http://bactrimnorxprice.com/ – bactrim generic
http://albuterolovercounter.com/ – albuterol inhaler 90 mcg
March 13, 2019 at 4:26 am
http://cialiscompareprice.com/ – buy cialis generic online
http://cephalexinnorxprice.com/ – keflex drug
http://tretinoinnorxprice.com/ – generic tretinoin
http://viagracompareprices.com/ – buy viagra online no prescription
March 13, 2019 at 8:51 pm
http://cymbalta.science/ – cost of cymbalta
http://cialiscompareprice.com/ – canadian cialis online
http://ventolinbestchoice.com/ – ventolin no prescription
http://tadalafilcheapestoffers.com/ – cheap tadalafil 20mg
March 14, 2019 at 1:27 pm
http://prozac006.com/ – cheap prozac
http://ventolincheapestoffers.com/ – proventil inhaler for sale
http://albuterolovercounter.com/ – albuterol no rx
http://prozac006.com/ – order prozac online
March 15, 2019 at 2:33 am
March 15, 2019 at 3:45 am
http://albuterolnorxprice.com/ – Cheap Albuterol
March 15, 2019 at 7:23 pm
March 16, 2019 at 2:11 am
http://accutane02.us.com/ – roaccutane buy
http://valtrexcompareprice.com/ – valtrex without prescription com
http://diclofenacovercounter.com/ – Diclofenac Sodium 75mg
http://prednisolonecheapestoffers.com/ – prednisolone 20mg
http://cialischeapestprices.com/ – levitra cialis
March 16, 2019 at 6:32 pm
http://lasixcheapestoffers.com/ – lasix without prescription
March 17, 2019 at 2:16 am
http://proscar2017.us.org/ – for more
http://lisinoprilcompareprice.com/ – price of lisinopril
http://levitra006.com/ – cheap levitra professional
http://albendazolenorx.us.com/ – albendazole price
http://proscar2017.us.org/ – learn more
March 17, 2019 at 11:44 pm
http://cafergot2016.us.com/ – our website
http://abilifynorxprice.com/ – abilify tablets
March 18, 2019 at 3:51 pm
http://viagracheapestprices.com/ – viagra online canada
March 19, 2019 at 4:10 am
http://valtrex2017.us.com/ – cheapest valtrex
March 19, 2019 at 6:46 pm
March 20, 2019 at 4:36 am
http://buywellbutrin.network/ – wellbutrin 300mg
http://tadalafil1038.com/ – tadalafil 5mg
http://buyfurosemideonlinenorx.us.com/ – 100 mg furosemide
http://orderkamagraonline.us.com/ – buy kamagra oral jelly
http://buyprednisolone.network/ – buy prednisolone 5mg without prescription uk
March 22, 2019 at 12:07 am
March 26, 2019 at 6:29 am
March 31, 2019 at 7:35 am
We’reagaggle of volunteers and startingabrand new scheme in our community. Your website provided us with valuable information to paintings on. You’ve done an impressive job and our whole community shall be thankful to you.
My partner and I stumbled over here different web address and thought I should check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to checking out your web page forasecond time.
April 6, 2019 at 4:35 pm